Cinegy: ဘုတ်အဖွဲ့တစ်လျှောက်ရှိ version 10 အဆင့်မြှင့်တင်မှုများ IBC2015 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » Cinegy: ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့တစ်ဖက်မှာဗားရှင်း 10 အဆင့်မြှင့်မှုများ @IBC2015
Cinegy မှာယင်း၏ပြည့်စုံထုတ်ကုန်လိုင်းပေါ်ဗားရှင်း 10 ပြပါလိမ့်မည် 7.A30 နှင့် 7.A41 ရပ် @IBC2015! IBC မှာဧည့်သည်များကဒီကြံ့ခိုင်ဗားရှင်းအဆင့်မြှင့် 4K လုပ်ငန်းအသွားအလာ Solutions, တိမ်တိုက် Multi-Channel ကိုပလေးအောက် Solutions, လုပ်ငန်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်မော်ကွန်းတိုက် Solutions, IP ကိုအခြေပြုအသံလွှင့် Solutions နှင့်သတင်းများ, စတူဒီယို & တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်ရှိကြောင်းပထမဦးဆုံးလက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုအသစ် features တွေကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည် ဖြေရှင်းချက်!
ဤတွင်အပေါ် featured ပါလိမ့်မည်အရာကို aa "လြှို့ဝှကျထှကျသှား peek" ရဲ့ IBC2015 အရောင်းပြခန်းကြမ်းပြင်:
Cinegy Desktop ကို Cinegy မော်ကွန်းတိုက်, Cinegy ရဲ့လုပ်ငန်းမီဒီယာမှကို real-time access ကိုအတူတစ်လောကလုံးထုတ်လုပ်မှုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ် မော်ကွန်းတိုက်ဖြေရှင်းနည်း။ Cinegy Desktop ကိုစံကို PC ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နှင့်သစ်ထုတ်လုပ်ရေးများအတွက်ပါဝါကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်, Rapid turnaround တည်းဖြတ်ရေးများအတွက်ဘက်ပေါင်းစုံအချိန်ဇယားနှင့်အတူရှာဖွေတည်းဖြတ်။ သစ်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်တည်းဖြတ်များအတွက် tools တွေကိုတစ်အစွမ်းထက် suite ကိုအတူ Cinegy Desktop ကိုဗားရှင်း 10 ယခုထပ်မံသတင်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာတိုးမြှင့်ကြောင်းသတင်းဝါယာကြိုးတင်သွင်းန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူသစ်နှင့်တိုးတက်လာသောသတင်းကဏ္ဍစီမံခန့်ခွဲမှုတို့ပါဝင်သည်။
Cinegy Air ကို PRO စီစဉ်ထားသို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစစ်ဆင်ရေးများအတွက် Multichannel software ကိုပလေးအောက်နှင့်အလိုအလျောက်ဖြေရှင်းချက် SD က၌တည်ရှိ၏ /HD သို့မဟုတ်ပင် 4K ။ Cinegy Air ကိုအလွယ်တကူတည်ဆဲ SDI အခြေခံအဆောက်အအုံသို့ပေါင်းစပ်ပြီး, ဒါမှမဟုတ် I / O များအတွက် IP ကို ​​streaming များ အသုံးပြု. 100% သောမိုဃ်းတိမ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အပြေးနိုင်ပါတယ်။ ဗားရှင်း 10 မှနယူးအင်္ဂါရပ်များပါဝင်သည်: က Ultra HD Aja သို့မဟုတ် Deltacast ထံမှ 4h ပလေးအောက်, စတူဒီယိုသို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသတင်း / Multichannel ပျဉ်ပြား Broadview ပေါင်းစည်းမှုများအတွက် SCTE 24 / လွယ်ကူ Multichannel စီးပွားဖြစ်သွင်း / Cinegy ယာဉ်အသွားအလာ Gateway မှာအတူ / အလိုအလျောက်စီးပွားဖြစ်သွင်း / အဘို့ (35K) / တစ်ခုမှာဖြေရှင်းချက် Utah သိပ္ပံ SDI router များထောက်ခံ
Cinegy Capture အ multi-ရုပ်သံလိုင်း, Multi-format ကိုနှင့် Multi-proxy ကိုစားသုံးမိပါဖြေရှင်းချက်နှင့်ဝယ်ယူ reinvents နှင့် ပစ္စည်း ingesting အပေါင်းတို့နှင့်လူကြိုက်များပုံစံများနှင့်ကွန်တိန်နာအတွက်ပြင်ဆင်ရန်သို့မဟုတ် web proxy များထုတ်လုပ်များ၏တာဝန်စညျးလုံး transcode ဖြစ်စဉ်ကို။ ဗားရှင်း 10 မှနယူးအင်္ဂါရပ်များပါဝင်သည်: ppm နှင့် VANC ညွှန်ပြချက် / Multicam နှင့်အတူတိုက်ရိုက် preview ကိုစားသုံးမိ / Scheduled မှတ်တမ်းတင် / Metadata ထောက်ခံမှု / အချိန်ဇယားဆွဲထားဖြစ်ရပ်များကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်စိတ်ကြိုက်အပြင်အဆင် / Deltacast SDI ထောက်ခံမှု / Nielsen ရေစာထောက်ခံမှု / Capture အအစီအစဉျနှင့်အတူနယူးထိန်းချုပ်မှုလျှောက်လွှာ
Cinegy မြင်ကွင်းစုံ Cinegy ရဲ့ဖြစ်ပါသည် Multi-ရုပ်သံလိုင်းကဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်ရေးဆော့ဖ်ဝဲ, ဒေသအလိုက်နှင့်အဝေးမှဂြိုဟ်တု, ကင်မရာ feeds တွေကို, ပလေးအောက် devices များနှင့်အခြားသတင်းရင်းမြစ်များမှစီးစောင့်ကြည့်ဖို့ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအိမ်များနိုင်ပါတယ်။ ဗားရှင်း 10 မှနယူးအင်္ဂါရပ်များပါဝင်သည်: 4KUHD input ကိုနှင့် output ကိုထောက်ခံမှု / တိုး SDI ဘုတ်အဖွဲ့မော်ဒယ်များ / ပေါင်းစည်း 608 / 708 CC ကိုဒီကုဒ်ဒါနှင့် display ကို / Dolby ဒီဂျစ်တယ်လ် / AC-3 certified ရရှိထားပြီးဒီကုဒ်ဒါ / Skinnable analogue နာရီ
ဒါကြောင့်သင်တို့အပေါ်မှာရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းသေချာအောင် 11th, အမ်စတာဒမ်အတွက် RAI မှာ IBC15 များအတွက် 2015 thru စက်တင်ဘာလ 2015th! အဆိုပါ IBC အကြောင်းအရာနေရာတိုင်းသည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်စားသုံးသူမှအီလက်ထရောနစ်မီဒီယာအကြောင်းအရာပုံစံအားလုံးကို၏ဖန်ဆင်းခြင်း, စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဖြန့်ဝေ powering သည့်နည်းပညာများနှင့်စီးပွားရေးမော်ဒယ်မှီဝဲ!
Cinegy အကြောင်း: Cinegy အိုင်ပီ Tools များအပါအဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်ငန်းအသွားအလာအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှရှုထောင့်လွှမ်းခြုံ, ဆန်းသစ်ဗီဒီယို, အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုဆော့ဖ်ဝဲကိုဖြေရှင်းချက်ဖွံ့ဖြိုး, သုံးစွဲ, ပလေးအောက်ကိုမှတည်းဖြတ်, အပြည့်အဝဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူတက်ကြွစွာ archive ကိုချိတ်ဆက်ထားပြီးအားလုံး။ စံအိုင်တီ Hardware နဲ့ Non-စီးပွားဖြစ်သိုလှောင်မှုနည်းပညာအပေါ်အခြေခံပြီး, Cinegy ထုတ်ကုန်အလွယ်တကူ Deployable နှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်, ယုံကြည်စိတ်ချရသောတတ်နိုင်, အရွယ်မှာဖြစ်ကြသည်။
2015 4K ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC စွဲငြိဖွယ်ရာ isovideo isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော JCT-VC ကို ဆူညံသံလျော့ချခြင်း UHD / 4K / HD ကို viarte ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် Warsaw ကို 2015-07-31
ယခင်: 12Stone ဘုရားကျောင်းရွေးချယ်မှုအတွက်-တစ်ဦးကနယူးအဝေးမှကျောင်းခွဲမှာအသုံးပြုမှုများအတွက် HVS-100 အိတ်ဆောင်ဗီဒီယို Switcher
နောက်တစ်ခု: Post ကိုထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်, တီဗီ